Android Antivirus အခမဲ့ဖြစ်သည် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အန်းဒရွိုက် Antivirus ကို
★★★ 13,500,000 ကျော်ခြိမ်းခြောက်မှုများကျော်! ★★★
Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းများကိုကာကွယ်တားဆီးပေးပြီး Android နှင့် Windows နှစ်ခုလုံးကိုပါသက်ရောက်စေပြီး၎င်းတို့မပျံ့နှံ့မီသင်၏စက်ထဲ၌၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်တွင်တပ်ဆင်စဉ်ကဗိုင်းရပ်စ်နှင့် malware များအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်သည့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အင်ဂျင်တစ်ခုရှိသည်။ Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးသည်တစ်ခုတည်းသောလုံခြုံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်
ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသင်၏စက်သိုလှောင်မှုတွင်၎င်းတို့ကို ဖန်တီး၍ ပြောင်းလဲလိုက်သော compressed zip ဖိုင်များအတွင်း၌ကြည့်ရှုသည့် application များ!
Itus Mobile Security သည် Android အတွက် Antivirus သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။
Android Features အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများ
★ Android အတွက်တည်ဆောက်ထားသောအဆင့်မြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အင်ဂျင်
★အချိန်မှန်အကာအကွယ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဖိုင်များနှင့် zip ဖိုင်များကိုသင်တပ်ဆင်သောအခါကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်
★ Deep scan သည်သင်၏ app များ၏ contents တစ်ခုလုံးကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း embedded ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် malware များကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်
★သင်၏ SD ကဒ်တွင်ရှိသောဖိုင်များကို Android နှင့် Windows ဗိုင်းရပ်စ်များကိုစစ်ဆေးသည်
★ Analytics ကဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဘယ်လောက်များများသည် Android အတွက် Antivirus မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖမ်းဆီးရမိ!
ကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသပ် & နှိုင်းယှဉ်
Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ဖို့ http://goo.gl/6L4gFB မှာငါတို့စမ်းသပ်သောဗိုင်းရပ်စ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုရနိုင်သည်။
သူကထုတ်ယူသော zip ဖိုင်တစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းထားသောစမ်းသပ်မှုဗိုင်းရပ်စ်မည်မျှရှာဖွေမည်နည်း။ နီးပါးမျှ!
ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပါ။ Android အတွက် Antivirus ကပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပေးတယ်ဆိုတာကြည့်ပါ။
Android 7.0 အတွက်ပံ့ပိုးမှုထပ်ထည့်သည်
Android အတွက် antivirus
4.05 ကို MB
GNDN ကာကွယ်ပါ -
မတ်လ 12, 2014 မှာ 3: 29 ညနေ
ဇန်နဝါရီလ 22, 2014 မှာ 4: 30 ညနေ
golu argal ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုလိုနီ sheopur says:
အောက်တိုဘာလ 18, 2013 မှာ 9: 26 နံနက်
bloing antiverus စိတ်ထဲ
စက်တင်ဘာလ 18, 2013 မှာ 7: 43 ညနေ